Wararka Maanta: Talaado, Sept 25, 2012-Nin lagu eedeeyey inuu Al-shabaab ka tirsanaa oo Muddo ku xirnaa Jeelka Berbera oo maxkamadda Somaliland ay go'aan ka gaartay
Haseyeeshee, ninkan lagu eedeeyey inuu Al-shabaab ka tirsan oo sanad iyo dheeraad xidhnaa ayaa dib u helay xoriyadiisii ka dib, markii wakhtiga gaaban ee lagu xumay ay noqotay mid ka yar mudadii uu xabsiga ku jiray sidaasna uu jeelkii kaga soo baxay.
Wiilkan dacwadiisa go’aanka laga gaadhay oo la yidhaa Ibraahim Maxamed Jeelle, oo ciidamada booliska Gobolka Saaxil sanadkii hore u qabteen tuhuno la xidhiidha inuu ka mid yahay kooxda Al-shabaab, isla-markaana ay sheegeen inuu tababaro ku soo qaatay Koonfurta Soomaaliya, ayaa muddo sanad iyo dheeraad ah dacwadiisu dhex wareegaysay maxkamadaha gobolka Saaxil, waxaana hore xukun saddex sanno ah ugu riday maxkamada gobolkaasi, balse waxa ku qanci waayey xukunkaasi ehelkiisa oo rafcaan ka qaatay, sidaas awgeed ayey maxkamada sare dib u gashay dacwadan, taas oo keentay in ay go’aan ka gaadho.
Guddoomiyaha Maxkamada sare ee Somaliland Yuusuf Ismaaciil Cali oo soo saaray go’aankan ayaa maxkamada kaga dhawaaqay in Ibraahim Maxamed Jeelle lagu xukumay 14 bilood oo ka bilaabmaysa wakhtigii la xidhay, taasi oo noqotay intii ay dacwadiisu socotay wakhti ka yar.
“Maxkamadu waxay ku xukuntay racfaanle Ibraahim Maxamed Jeelle Ina Nuuriya Maxamed hal sanno iyo laba bilood oo xadhig ah, oo ka soo bilaabmaysa maalintii xoriyadiisa laga qaaday”ayuu yidhi Guddoomiyaha Maxkamada sare Yuusuf Ismaaciil oo booqasho ku tagay gobolka Saaxil.
Xukunka ku dhacay ninkan lagu eedeeyey Al-shabaabta, ayaa xoriyadiisa dib u hellay, isla-markaana laga siidaayo jeelkii lagu hayey, maadaama oo wakhtiga lagu xukumay ay ka badan tahay mudadii la hayey.
Maxkamadda gobolka Saaxil ayaa wiilkan dhalinyarada ah hore ugu xukuntay saddex sanno oo xadhig ah, haseyeeshee markii maxkamadda sare baadhay kiiskiisa waxay ku xukuntay 14 billood oo xadhig, kadibna markii intii uu xidhnaa loo eegay ayey maxkamadda sare dib ugu soo celisay xoriyadiisii.